Vaovao - Conversazione afovoan'ny fararano ho an'ny Studuent amin'ny taona 2020
Tamin'ny 29 septambra 2020 Jitai Electronics Co., Ltd dia nanao Coversazione Mid-Autumn ho an'ny mpianatry ny oniversite tamin'ny taona 2020 izay iray amin'ireo tradiition tsara ao amin'ny orinasako ary manome fotoana iray hampitomboana ny tenany izay vao miditra amin'ny orinasa. Mandritra izany fotoana izany koa dia sehatra iray hitondran'ny tsirairay ny tenany (izy). Mpianatra oniversite vaovao 40 avy amin'ny sampana samihafa no nandray anjara tamin'ny Mid-Autumn Conversazione.
Ny votoatin'ity fivoriana ity dia natao ho an'ny hevitra avy amin'i Jack Ma, mpanorina ny Alibaba "fientanam-pientanam-po, fahitana fahitana, fahasambarana" ary ny "fihetseham-po manapa-kevitra ny lahatra" Ireo mpianatry ny oniversite ao amin'ny orinasanay dia manome hevitra mifototra amin'ny fahatakaran'izy ireo.
Ireo mpandray anjara tao amin'ilay conversazione dia nandray izany tamim-pahamatorana ary nanao fanomanana feno indrindra ireo mpianatra mpianatry ny oniversite sasany ary naneho hevitra tamim-pahasahiana ny heviny (ny). Ny fanehoan-kevitra rehetra dia nohamarinin'ny orinasa tsotra izay iray amin'ny fototry ny fizarana asa, ny fampiroboroboana ny karama, ny fisafidianana mandroso ary ny famoronana hatsarana.
Manakaiky ny faran'ny fifanakalozan-kevitra dia nanatsoaka hevitra i Jun Ma, filohan'ny orinasanay fa ny fanidiana ny tsena ivelany tamin'ny taona2020 dia ambany, ampy ny filaminan'ny entana, fa ny orinasanay kosa mavesatra ny asa sarotra ary niatrika zava-tsarotra sy fanamby betsaka ka niriko ny ny mpiasa zokiolona rehetra sy ny mpianatry ny oniversite vaovao dia nanohy nilalao ny talentao ary nampihatra ny fahalalana sy ny traikefa tamim-pahazotoana tanteraka amin'ny asa ary mbola nanohy ny fomba fiasa azo ampiharina mba hijerena ireo olana misy tsilo ary hifikitra amin'ny tanjonao ary aza avela handeha hanafaingana ny tanjon'ny famokarana an'ny orinasanay amin'ny taona 2020 amin'ny alàlan'ny ezaka sy tolona. Mandritra izany fotoana izany dia mirary fety sambatra sy fianakaviana sambatra ho anareo rehetra aho. Farany dia manantena izy fa afaka mahazo fandrosoana sy fampandrosoana eo amin'ny orinasa ny olon-drehetra.
Amin'ny alàlan'ity confsazione ity dia tsy ny mpianatra mpianatry ny oniversite ihany no mifampijery, manatsara ny fahatsapan'ny tsirairay ny sehatra, fa manatsara ny fahatokisan-tenany sy ny fahatapahan-kevitr'izy ireo hipaka ao amin'ny orinasa.